Nahazo ny Fankatoavana Nilaina ny Teny Swahili, Fiteny Faharoa Be Mpiteny Indrindra eto Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2017 10:41 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, русский, Français, Ελληνικά, English, Español, Português, English
Sary: Eli Duke tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Raha tombanana ho manana mpiteny miisa 100 tapitrisa, ny Swahili no fiteny faharoa be mpampiasa indrindra ato amin'ny kaontinanta Afrikana, aorian'ny teny Arabo. Na izany aza, tsy mbola vonona ara-barotra ny tolotra toy ny famantaran-teny mandeha ho azy (ASR) amin'ity fiteny ity, izay manilika ny mpiteny azy azy maro manana fahasembanana sy ireo tsy mahay mamaky ny torohay ilain-dry zareo indrindra amin'ny fiainany andavanandro. Mety hiova tsy ho ela anefa izany, satria hiray dia hanome teknolojia voafaritra ho an'ny mpiteny Swahili ny fikarohana akademika sy ny aingavaon'ny teknolojia.
Fikarohana aterineto amin'ny finday tsotra
Eo an-dalam-panatontosana ny iray amin'izany zava-baovao tena azo antenaina indrindra ny ao Kenya. Ny Uliza (midika hoe “manontania” amin'ny teny Swahili) dia lasitra famnataran-teny mamela ireo mpisera mba hahazo vaovao avy amin'ny Aterineto amin'ny alàlan'ny fampiasana ny finday tsotra.
Mila manao antso ary manontany amin'ny teny swahili ny mpisera rehetra. Misy ny “mpamaly” (olona miasa ao ambadiky ny sehatra) ao anatin'ny 15 ka hatramin'ny 90 minitra, izay mamaly amin'ny feo . Amin'izao fotoana izao, misy “vahoaka” eo amin'ny manodidina ny 50 eo no mandray ny fanontaniana amin'ny alalan'ny fandikana ny fandraketam-peo, mitady valiny an-tserasera amin'ny fiteny maro ary mandika ny fanazavana ka mandefa azy miverina indray any amin'ny mpiantso amin'ny teny swahili.
Nandritra ny fanandramana natao tao Nairobi, renivohitra Kenyana sy tany andrefan'i Kenya, nisy mpisera beta miisa 600 nandefa fanontaniana momba ny solontenany ao an-toerana, nangataka fanampiana tamin'ny devoara amin'ny teny Swahili , ary nangataka fanazavana ara-pitsaboana izay mety ho saro-pady loatra raha atao mivantana.
Nandritra ny tetikasa fanandramana Uliza, ireto no teny tafiditra tao anatin'ny fanontaniana matetika indrindra izay navoakan'ny mpisera (nadika avy amin'ny teny Swahili ho amin'ny teny Anglisy).
Hamaha olana hafa ho an'ny mpiserany rahatrizay ny Uliza, dia ny tsy fisian'ny torohay ao amin'ny Aterineto. Maro ny antony sosona mahatonga izany toe-draharaha izany: vidim-ponosana lahatahiry finday lafo loatra, ny halaviran'ny cybercafe akaiky indrindra, ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra amin'ny fiteni-pifandraisana lehibe kokoa, izay vao mainka miha-sarotra noho ny tsy fisian'ny votoaty amin'ny fiteny ao an-toerana.
Tsy olana ara-teknolojia
Mitaky asa be tokoa ny maodelin'asa ifarimbonana ampiasain'ny Uliza kanefa mametraka tombony lehibe: amin'ny fananana olona mitantana ny fandikana avy amin'ny feo sy ny fandikan-teny, manivaka vonjimaika amin'ny tsy fahampian'ny lahatahiry am-peo izay matetika maneritery ny ezaky ny ASR amin'ny fiteny Afrikana izany, sady manangona ihany koa ny lahatahiry avy amin'ilay mpampiasa ny teny manana firoky sy fitenim-paritra isan-karazany. Mikasa ny hampiasa ity tahirin'ny fandraisam-peo fohy ity sy ny dikantsoratra mba hanaovana milina mianatra mizatra sy hampaleo tena tanteraka rahatrizay i Grant Bridgman mpanorina ny Uliza. Tao amin'ity lahateny tao amin'ny Oniversite Tufts ity, nanazava ny tsirikevitra ambadiky ny tetikasa i Bridgman :
Efa maro ireo fikarohana natokana hananganana ny rindrambaiko mahaleo tena mamantatra ny teny amin'ny teny Swahili sy ireo teny Afrikana hafa be mpampiasa, kanefa mila fotoana ny teknolojia mba hahitany ny lalana hanatonany ho eny ampelatanan'ny olona. Tao amin'ny antsafa iray niarahana tamin'ny Global Voices, nanazava i Bridgman :
Misy ny teknolojia ary efa azo ampiasaina ho an'ny teny voalohany be mpampiasa manerantany, ary ankehitriny isika mila mitady maodely ara-barotra azo iainana ho an'ny fiteny tsy maro loharanom-baovao.
Ireo orinasa te-hanangana fanohanana ho an'ny mpanjifa any ambanivohitra amin'ny vidiny nisy fihenam-bidy no mety ho mpanjifa ilaina hanao ny dingana voalohany mankany amin'ny fivelaran'ny Uliza. Mety ho ampidirina ihany koa ny tolotra feno mamela ireo mpisera amin'ny finday tsy manana fahafahana miditra amin'ny aterineto mba hahita ny valin'ny fanontaniany, ary handefa ny votoatin'ny feony horaketina. Ho kely ny vola aloan'ny mpisera izay hifanahatsahana amin'ny vidin'ny somaiso iray.
Mety ho azo iainan'ny teny hafa manana mpiteny betsaka ny maodely Uliza. Fa tsy izany anefa no mitranga ho an'ny ankamaroan'ireo fiteny miisa 2.000 ampiasaina ato amin'ny kaontinanta Afrikana . Kanefa mety ho tonga avy amin'ny tetikasam-pikarohana notarihin'i Preethi Jyothi tao amin'ny Ivontoerana Beckman ny vahaolana, izay ahitana ekipa mpikaroka mampiasa fomba mamadika ny mety ho dikantsoratra ny feo avy amin'ireo tsy tompon'ny teny. Rehefa mety tsara ilay fomba mamadika ny mety ho dikantsoratra, dia manokatra ny lalana ivoahan'ny ASR ho an'ireo fiteny tsy be mpampiasa, amin'ny vidiny azo iafiana izany.